Ny lahatsoratra tena mahaliana indrindra ny lahatsoratra Wikibook Recommended by The Semalt Expert
Wikipedia dia nanambara fa ny dikan-teny Anglisy dia nahitana 5 tapitrisa fidirana fidirana nanomboka tamin'ny nanombohana azy tamin'ny 2001. Fahombiazana goavana sy mahery vaika izany. Misy rohy 2,5 miliara eo ho eo izay manampy betsaka amin'ny fampahalalam-baovao. Ny vaovao dia be loatra ny hamaky tanteraka olona iray. Na dia nisy olona nanomboka namaky ireny bolongana ireny isaky ny iray androany, dia mety haharitra 19 taona izy ireo hamita azy ireo.
Ireo mpankafy Wiki dia afaka nanendry ny hevi-dehibe ary tonga tamin'ny Wikipedia lahatsoratra izay tena fampahalalana, mampientanentana ary mampihomehy. Ireto ny lahatsoratra wiki mahaliana indrindra nofantenana avy amin'i Oliver King, ny Semalt Mpitarika Success Successor:
Ireo Papa mavitrika mavitrika
Ity lahatsoratra ity dia azo lazaina ho samy mahatsikaiky, informatika nefa tsy feno. Ity hevitra momba ny fanangonana ny lisitr'ireo paompy izay mavitrika ara-pananahana dia tsy manan-tsahala, saingy ho hitanao fa maro ny fangatahana fanesorana satria mety hahatsiaro ho tsy mahazo aina ny olona sasany, saingy mbola tafavoaka velona izany.
Fahadisoana sy fahafatesana tsy mahazatra
Rehefa nanadihady ireo mpanoratra azy momba ny lahatsoratra ankafiziny ny tahiry wiki dia anisan'ny nahazo ny loka ambony indrindra ny lisitr'ireo fahafatesana miafina, diso hevitra sy angano an-tanan-dehibe. Ireo tantara ireo dia mahavariana tokoa.
Ity no tantaran'ny saka matoatoa izay lazaina fa 3m avo lenta amin'ny fananganana ny Washington DC Capital Buildings. Antenaina fa hiaina ao an-tranon'ireo tranobe izay natao voalohany ho efitra fandevenana an'i George Washington..
Ity dia iray amin'ireo lahatsoratra mifandraika sy voaova ao amin'ny Wikipedia satria miresaka momba ny endrika manan-danja indrindra teo amin'ny tantara. Na izany aza, mbola mitazona ny kalitao avo indrindra ao amin'ny Wikipedia ny lahatsoratra.
Nandositra ny fonjan'ny helikoptera
Ity lahatsoratra ity dia mahatonga ny fiainana hahatsapa fa mbola miaina Amin'ity taona 1970 ity ny hetsika vaovao New Hollywood izay misy ireo helikoptera mivoaka ny fonja.
Ny Wikipedia tsy
Ny tena antony mahatonga ny olona hijery ny Wikipedia dia ny mamantatra ireo zavatra efa nohazavaina tsara ho an'ny fahatakarana tsara kokoa. Na izany aza, ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatakatra ny zavatra tokony tsy andrasany hitadiavana azy ao amin'ny Wikipedia.
Lisitry ny lisitra
Sarotra be izany. Ny lahatsoratra iray dia lisitr'ireo lahatsoratra izay lisitry ny lahatsoratra voatanisa ao amin'ny Wikipedia. Ity no fizotran'ny Wiki.
Ireo mpamono izay novonoin'ny fanononany
Ny zava-miseho tanjona hanatsarana ny traikefan'ny olombelona sy ny mpamono voavono dia ny zavatra farany izay mety hitranga. Ireo lahatsoratra ireo dia miresaka momba ny fifandraisana eo amin'ny olona sy ny teknolojia. Rehefa noforonina ny zava-misy, dia misy ny tsy fahampian-tsika izay tsy azontsika anoharana.
Ireo pejy ireo dia momba ireo gafera politika, fehezanteny ary fanambarana diso na tsy mazava ao amin'ny tantaram-piainana politika manerantany, ohatra hoe "eny izahay afaka"
Tany am-piandohana, rehefa nipoitra ny areti-mifindra Ebola, mpitsabo ara-pitsaboana sasany dia nivory mba hanangona lahatsoratra momba ny Ebola izay mikendry ny hampiasa Wikipedia ho loharanom-baovao azo itokisana kokoa momba Ebola. Ny lahatsoratra dia nadika tamin'ny fiteny maro mba hahafahan'ny olona maro hahatakatra izany.
Astronomie Amerikana izay nino fa nanana fahafaha-manao zavatra maro izy kanefa tsy nahavita na inona na inona tamin'ny fizika na ny astronomie Source .